Ny lahatsoratr'i Nikhil Raj momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Nikhil Raj
Alahady, Martsa 17, 2013 Talata, Septambra 24, 2013 Nikhil Raj
Vao haingana aho no nanao fitsapana momba ny valin'ny Google Search Engine. Nikaroka ilay teny hoe WordPress aho. Nahasarika ny saiko ny valiny ho an'ny WordPress.org. Google dia nitanisa ny WordPress miaraka amin'ny famaritana ny Sehatra famoahana manokana an'ny Semantic: Mariho ilay sombin-javatra nomen'ny Google. Ity lahatsoratra ity dia tsy hita ao amin'ny WordPress.org. Raha ny marina dia tsy manome famaritana meta mihitsy ilay tranonkala! Ahoana no nifidianan'ny Google an'io lahatsoratra misy heviny io? Mino izany na tsia, nahita ny famaritana izany avy amin'ny iray
Talata, Janoary 15, 2013 Talata, Septambra 24, 2013 Nikhil Raj
Nahita olana hafahafa iray hafa omaly izahay rehefa nandinika ny fahombiazan'ny motera fikarohana voajanahary ny mpanjifanay. Nanondrana sy nandinika ny fiheverana aho ary nanindry ny angona avy amin'ny Google Search Console Tools ary nahatsikaritra fa tsy misy isa ambany, zerôs sy isa lehibe ihany. Raha ny marina, raha hino ny angona Google Webmasters ianao, ny teny tokana tokana izay nahatonga ny fivezivezena dia ny anarana marika sy teny mifaninana ifaninanan'ny mpanjifa. Misy olana anefa.
Search Engine Optimization ho an'ny tranonkala iraisam-pirenena dia lohahevitra sarotra foana. Hahita torohevitra marobe eto amin'ny Internet ianao fa tsy tokony hampihatra ny tendro rehetra henonao. Makà fotoana hanamarinana ny vaovao hitanao amin'ny Internet. Na dia mety nanoratra azy aza ny manam-pahaizana iray, tsy midika izany hoe marina foana izy ireo. Raha jerena, Hubspot dia namoaka ebook vaovao 50 SEO & Torohevitra momba ny tranokala ho an'ny Marketer Iraisam-pirenena. Mpankafy ny Hubspot sy ny masoivohonay izahay